Edere site Tranquillus | Jan 26, 2021 | Office
A mara mma obere shopping-themed ngagharị animation na PowerPoint. Iji mepụtagharịa ihe niile a, ị nwere ikike inweta ọtụtụ ndụmọdụ. Goodzọ dị mma iji chekwaa ezi echiche maka mmịfe gị ndị ọzọ. Jiri ohere iji nyochaa ihe dị iche iche dị iche iche nke ngosi dị mma na edemede ndị ọzọ.
Kwadebe usoro nke okwu gị tupu oge eruo
Mgbe ndị mmadụ na-aga-ezukọ na-aga gị okwu. Ha agaghị abịa gburugburu lee foto mara mma. Ha nwere ọrụ, ha enweghịkwa oge igbu oge. Ya mere, ị ga-akwadebe nke ọma ozi ị chọrọ izi. Atụmatụ zuru ezu nke na-akọwa usoro nke isiokwu ị ga-atụle na usoro nke ịdị mkpa ha bụ ihe dị mkpa dị mkpa.
Gbaa mbọ hụ na nkwupụta okwu gị dabara adaba
Na a doro anya echiche nke otú gị itinye aka ga-gbasaara n'uche. Ọ dị gị mkpa ịlele agbanwe agbanwe ma na ihe na n'ụdị nke ihe niile. Ọ bụrụ na slide ọ bụla jiri font na agba dị iche. Ma ị na-ekwu otu okwu na-emegiderịta onwe ya ma ọ bụ nke na-emegiderịta onwe ya kpam kpam, mkpokọta nke obere njehie ga-ezighachi ọdịdị nke mmasị amateurism. Ọ bụ ezie na, n'ụzọ dị iche, otu ihe nkiri slide na-asọpụrụ otu ụkpụrụ eserese ahụ nwere nkwupụta akara na nke ọma. Ga-egosi ike ọchịchị gị zuru oke.
Jiri usoro mgbasa ozi nke ọma
Ejiri ya n’emeghị ngafe, ihe ngosi na foto mara mma nwere ike ime ka ndị na-ege gị ntị mụrụ anya. Agbanyeghị, kpachara anya maka ikwubiga okwu ókè na mpaghara a. Ihe ngosi slide nke ejiri foto achọ mma chọọ ya mma. Egwú nkiri dị n'etiti ngosi iji gosipụta nkọwa na-enweghị isi. Enwere ike iwere ihe a niile dịka enweghị oke egwu. Cheta na foto dị mma karịa otu puku okwu ma ọ kacha mma idobe ya. Ihe ngosi a gha adabere na ntinye aka gi. Ihe ngosi mmịfe dịịrị iji kwado gị ma gosipụta isi okwu gị.
GỤỌ Tọọ igbe ozi igbe gị dịka igbe egwu
Jiri uzo di nkpa
Mgbe ị na-ekwu maka onu ogugu ma obu ihe omuma, odi nkpa ka anyi mara mbido okwu gi. Nke a ga-eme ka ndị na-ege gị ntị nyochaa eziokwu nke ozi ị na-enye ha. Agaghị arụ ọrụ dị egwu na etu esi arụ ọrụ gị. Nkwenye gị ga-apụtawanye ike. Agaghị eme ka gị na ndị na-achụpụ ọnụọgụ ma ọ bụ na-ekwu ihe a na-apụghị ịchọpụta akọwahie, ndị aghụghọ ahụ.
Megharịa ihe ngosi gị tupu ụbọchị D
Mee ka om um u ihe gh otara na ihe ịma aka nd ii ga-enye. Maka nzukọ ngwa ngwa na ndị ọrụ ibe, ule na-adịkarị mfe ga-ezu. N'aka nke ọzọ, na isiokwu nwere nnukwu nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na e mehiere ihe. Ikwesiri izere nleghara anya ọ bụla, belụsọ na ị nabatara nsonaazụ ya. Enweghị ajụjụ ọ bụla ị ghọtara n'ihu onye ahịa ma ọ bụ onye njikwa na otu n'ime aha gị apụtaghị. Ebee ka ichefuru idepe ederede gị niile. A ghaghị enyocha ihe niile tupu oge eruo.
PowerPoint ngagharị animation nkuzi Machị 5th, 2021Tranquillus
gara agaNleta ahụike na 2021: gịnị bụ ọrụ gị?
-esonụLọ ọrụ: ndị ọrụ agaghịzi enwe ike iyi masks a na-eme n'ụlọ